Dongguan ka Nasahanyahay Star Laser Technology Co., LTD, iskaashiga Sino-Jarmal, xooga la saarayo teknolojiga laser & codsiyada, ka dib sannado badan oo hal-abuurnimo joogto iyo horumarka, waxa uu noqday saaraha ah oo baaxad weyn oo si fiican u yaqaan qalabka laser.
Shirkadda iska leh dhismaha xafiiska, R & D Building, dukaan machining, rinjiyeynta iyo dukaan alxanka, dukaan ururinayo, macradka casri ah oo warshad warshadaha caadiga ah.
waxyaabaha ugu weyn ee shirkadda ayaa mashiinada bir goynta laser, mashiinada goynta laser non-birta, laser mashiinada sixitaanka, mashiinada alxanka laser iyo foorarsiga machines.The awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 8,000 nooc oo alaabta lagu iibiyo in ka badan 100 dal iyo gobollada.
Shirkadda waxa la aqoonsaday sida shirkada teknoolojiyad sare ee qaranka, oo si joogta ah ku guuleystay technology ee Innovation Award. Hogaamiye ahaan in qalabka laser, Glorystar Laser technology Co., Ltd ayaa R & D nidaam dhamaystiran, iyadoo jaamacadaha badan oo caan ah gudaha iyo hay'adaha cilmi-baarista si ay u ilaaliyaan wada shaqaynta dhow indhaha iyo farsamo, sidoo kale waa machadka Nanyang sayniska iyo farsamada saldhig Graduate arday.
Products sameeyey shahaado CE EU iyo shahaado SGS ah, iyo dhammaan dhinacyada soo socda, geedi socodka, mashiinka, maraakiibta iyo waafaqsanaanta kale la tilmaamo tayo leh iyo maaraynta nidaamka maamulka deegaanka ISO si loo hubiyo in tayada qaranka. Qaadashada hortiisa view Global, GLORYSTAR dhawraa on diiradda sayniska laser ah iyo technology in aan idinla wadaago mustaqbalka si guul leh!